Ngaphandle kwesebe yokulungisa injini okanye ikhathalogu yokuzenzekelayo, akunakwenzeka ukuba ubone i-gasket yentloko. Nangona ifihlwe kakuhle, i-gasket yentloko, enye kwi-i4 okanye ezimbini kwi-V6 okanye i-V8, yenza imisebenzi emininzi ebalulekileyo. Ngenxa yokuba ayifuni ukuba isuswe, iifomethi zentloko zixhomekeke kakhulu, zijongene nokutshintsha kweqondo lokushisa kunye noxinzelelo kumakhulu amawaka eekhilomitha. Ukuba i-headket gasket ihluleka, ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba "i-headset gasket," inokubangela ukuvuza okupholileyo, ukuvuza kweoli okanye ukuvuza kwemilinda. Ngokuxhomekeka kubunzima, iziphumo zinokuba ngumsindo okanye ziyakuthintela injini ukuba isebenze ngokufanelekileyo , ukuba kunjalo.
Yenzani i-Gasket Head?
Intloko yeGesi iCwangcisa phakathi kweNtloko yeCylinder kunye ne-Engine Block. http://www.gettyimages.com/license/646740348
I-gasket yentloko iqhutywe phakathi kwebhokisi ye-injini, equkethe i-crankshaft kunye ne-piston, kunye nentloko ye-cylinder, equkethe i-camshafts ne-valves. Uninzi lweenjini zanamuhla zisebenzisa i-gaskets yentsimbi ye-steel-layer (MLS), ngelixa ama-injini amaninzi adala asebenzisa i-asbestos okanye i-headset. Ezinye iinjinisi zingasebenzisa i-gaskets enobumba obunzima. Kungakhathaliseki ukuba zeziphi izinto eziphathekayo, i-headkitik ephezulu yenza imisebenzi emithathu esemqoka:
Isilindi sokutywinwa - Nangona injini isebenza, ukunyanzeliswa kwe-petroli ye-cylinder ingakwazi ukugqitha ngaphezu kwe-700 psi, kwaye ukunyanzeliswa kwe-diesel cylinder kungaphaya kwe-2,000 psi. Ukuqhawula phakathi kwentloko ye-cylinder kunye ne-injini block, i-gasket yekhanda iqulethe ezo zinyanzeliso zokuxinwa kwe-cylinder kunye nokwandisa. I-MLS kunye neefomethi zentloko zivame ukuba nesongezelo esikhethekileyo sokutywinwa esakhiwe ngokukodwa kule njongo, ngelixa i-gaskets head head ingafuna ukuchithwa kwe-engine block ukufaka loo nto.
Iqhuba i-Fluids - Injini yokupholisa kunye neoli ye-injini iyadingeka kwi-injini ye-injini kunye ne-cylinder head, kunye nezichwephelo kwi-gasket yentloko zivumela ukuhamba kwamanzi phakathi kwezi zibini. Intloko ye-cylinder, injini yokupholisa igcina i-valve kunye ne-spark lokushisa kwiplagi, ngelixa ioli ye-injini iyabonakalisa kwaye inika uxinzelelo lwe-hydraulic, njengexesha lokuguquguqula i-valve.
Iqukethe i-Fluids - Ngelo xesha, i-injini yokupholisa kunye neoli ye-injini ye-injini ikwahlukana kuphela ngamamitha ambalwa. I-gasket yekhanda ivimbela la manzi aphuma kumxube. Kwakhona, amagesi avuthayo ayenqandwa ukuba angene kwiinjini ezisezantsi ezisezantsi kunye neendinyana zeoli, kunye nakwezinye izinto. Ngokuxhomekeke kwindlela yokuyila, i-gasket yentloko inokuthi i-O-rings iphucule ukutywinwa kwiindawo ezithile.
Iimpawu ezisixhenxe zeGreyket Head Headlight
I-Gasket Head Headlight mhlawumbi idibene kwiiSilinders. https://www.flickr.com/photos/tonysphotos/6527707149
Ukuba i-gasket yekhanda ihluleka kwenye yale mi sebenzi emithathu, iziphumo zinakho okanye zingabonakali, ngokuxhomekeka ngokucacileyo ukuba i-gasket yentloko ithe yahluleka njani. Nazi iimpawu eziliqela ze-headket gasket kunye neendlela onokuzijonga ngayo:
I-Cylinder Misfire - Oku kudla ngokuba yintoni abantu abaninzi abayicinga xa bebhekisela kwi-gasket yentloko. Kule meko, ukutywinwa okujikelezayo kwindlinda kuye kwahluleka. Ngenxa yokuba i-cylinder ayikwazi ukwakha uxinzelelo olwaneleyo, inokutshatyalaliswa ngokusweleka, ukuba kukho konke. Ukuba kukho ezimbini i- cylinder-misfires kwizikhonkwane ezikufutshane, oku kuthetha ukuba i-gasket yekhanda iyaqhuma phakathi kwamacangci amabini okuvalwa. Eyona nto iqhelekileyo kunye neerkkets zeenhloko eziyinxalenye, ayilwanga nge-MLS okanye i-gaskets zeentloko zethusi.
Ukuvuza kwamanzi okwangaphandle - Ukuvuza kwamanzi okungaphandle kubonakala, njengoko uza kuphawula izinga eliphantsi leoli okanye injini epholileyo, kunye neoli okanye i-resiant ephumayo kwi-injini, ephuma kwisixokelelwano phakathi kwe-injini kunye ne-cylinder head. Ukukhupha ukuvuza okuvela phezulu ngasentla kweli nqaku, njenge-head cylinder okanye i-valve cover, i-gasket head head blow is a bangela.
Ukuvuza kwangaphakathi - Oku kunzima ukuphawula kwaye kunzima nakakhulu ukukhomba, kuba awukwazi ukubona oko kwenzekayo ngeaso iso.
Ukuba ioli iphoqelelwe kwiifayili ezipholileyo, unokwazi ukubona ifilimu ekhangeleka njengeyayonnaise, ifakwe kwisitampu se-radiator okanye kwindawo epholileyo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba i-coolant iphoqelelwe kwiifayile zeoli, unokubheka into ekhuphayo kwimigca ye-valve okanye ngaphantsi kwe-oyileji yokugcwalisa ioli.
Ukuba i-cylinder gases iphoqelelwe kwinkqubo yokupholisa, oku kungakhokelela ipokotshi zomoya kunye nokutshiswa kweenjini . Ukuqhaqhazela kwisityezelo sokupholisa okupholileyo kuwuphawu oluqinisekileyo lwe-headket gasket.
Ukuqhoqhoqhoqhoqhozelwa kwisilinda kungabangela umsi omhlophe ekugqibeleni , ngokuqhelekileyo ekuqaliseni, ngokuba ukupholisa phantsi koxinzelelo kuvuza kwi-cylinder xa injini ivalwe.
Kwiimeko ezigqithiseleyo, i-coolant eyaneleyo inokunyanzela indlela yayo kwi-cylinder ukuba ibangele i-hydrostatic lock, okanye "i-hydrolock" kunye nomonakalo wonakalo wenjini.
Ukuchonga nokulungisa i-Gasket Head Headlight
Izixhobo, ukuQeqesha, kunye neZenzo Zenza iMetchanic. http://www.gettyimages.com/license/88620858
Ukuba wena okanye ugqirha wakho uphonsela i-headset gasket, ukuxilongwa kungadla ixesha , njengoko ezinye iimpazamo zingabonakalisa iimpawu ezifanayo. Uvavanyo lwexinzelelo, uvavanyo lokuvuza, kunye nokuhlolwa kwebhloko kunokufuneka ukuba unqume ukuba i-gasket yentloko iphosakele okanye ukuba ibangelwa enye iphoso, njengebhokisi ephahliweyo, ukufakelwa kwe-fuel injection, i-ignition, i-valve, okanye ingxaki yendandatho ye-piston.
Nangona ikiti ye-gasket yedwa yinto engabizi, iindleko zokutshintsha zingabonakala zikhulu, kodwa kufuneka ziqukumbele ukugqitywa kwe-injini, kubandakanywa izicwangciso zexesha, ukungenisa kunye nokukhupha, izinto zentloko ye-cylinder kunye nentloko ye-cylinder. Ukufakela iimpahla kungabimfuneko ukuba ukugqithisa kwintloko kubangela ukuba i-cylinder head head warping, yongeze kwiindleko zokulungiswa . Zonke izinto ezicatshangwayo, kunokufanelekile ukuba ivuse injini ukuze ihlale enye iilidi ezili-100 000 okanye ngaphezulu.
Unyana, uRamchera, noMariachi Styles Musical eMexico
Ukuthuthwa kwamangcwaba okuSebenzayo
Ukuchaza iCandelo elibizwa ngokuba yiCondor eGoli
Ukubala Umthi Wentsapho Yakho
Inkcazo yeNgel Curve
"Eleemosynary," Umdlalo odelelekileyo nguLee Blessing